समाचार - एल्युमिनियम बोर्ड र पीसीबीबीचको भिन्नता बुझ्दै
एल्युमिनियम बोर्ड के हो
एल्युमिनियम बोर्ड एक प्रकारको धातु आधारित तामा लगाइएको बोर्ड हो जुन राम्रो ताप तापक्रम फंक्शनको साथ हो। सामान्यतया, एकल प्यानल तीन तहबाट बनेको हुन्छ, जुन सर्किट तह (तामाको पन्नी), इन्सुलेशन तह र धातु आधार तह हुन्छन्। एलईडी प्रकाश उत्पादनहरूमा यो सामान्य छ। त्यहाँ दुई पक्ष छन्, सेतो को एक पक्ष वेल्डेड नेतृत्व पिन, अर्को पक्ष एल्युमिनियम रंग छ, सामान्यतया गर्मी चालन पेस्ट र गर्मी चालन भाग संग सम्पर्क को लेप गरीनेछ। त्यहाँ पनि सिरेमिक बोर्ड र यस्तै।
पीसीबी के हो?
पीसीबी बोर्ड सामान्यतया छापिएको सर्किट बोर्डलाई जनाउँछ। पीसीबी (पीसीबी बोर्ड), जसलाई पीसीबी पनि भनिन्छ, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको बिजुली जडानको प्रदायक हो। यो १०० बर्ष भन्दा बढि देखि विकसित भइरहेको छ; यसको डिजाइन मुख्य रूप लेआउट डिजाइन हो; सर्किट बोर्ड प्रयोग गर्नुको मुख्य फाइदा भनेको तार तथा विधानसभाको त्रुटि धेरै कम गर्नु, र स्वचालन स्तर र उत्पादन श्रम दर सुधार गर्नु हो।
सर्किट बोर्डहरूको तहहरूको संख्याका अनुसार यसलाई एकल प्यानल, डबल-साइड बोर्ड, फोर-लेयर बोर्ड, छ-लेयर बोर्ड र अन्य बहुपरत सर्किट बोर्डहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। किनकि प्रिन्ट गरिएको सर्किट बोर्ड सामान्य अन्तको उत्पादन होईन, यो नामको परिभाषामा अलि अलमल्लमा परेको छ। उदाहरण को लागी, व्यक्तिगत कम्प्युटर को लागी मदरबोर्ड लाई मदरबोर्ड भनिन्छ, तर सीधा सर्किट बोर्ड भनिन। यद्यपि त्यहाँ मुख्य बोर्डमा सर्किट बोर्डहरू छन्, यो समान छैन, त्यसैले उद्योगको मूल्या evalu्कन गर्दा उस्तै कुरा गर्न आवश्यक पर्दैन। उदाहरण को लागी, किनभने त्यहाँ सर्किट बोर्ड मा आईसी भागहरु लोड, समाचार मिडिया उसलाई आईसी बोर्ड भन्छन्, तर वास्तवमा, उनी प्रिन्ट गरिएको सर्किट बोर्डको बराबर छैन। हामी प्राय: प्रिन्ट गरिएको सर्किट बोर्डलाई बेयर बोर्डको रूपमा हेर्दछौं - त्यो हो, माथिल्लो तत्वबिना सर्किट बोर्ड।
एल्युमिनियम बोर्ड र पीसीबी बोर्ड बीचको भिन्नता
केही साना साझेदारहरूको लागि, जसले भर्खर मात्र एल्युमिनियम बोर्ड उद्योगमा संलग्न गरेका छन्, त्यहाँ सँधै त्यस्तो प्रश्न रहन्छ। त्यो हो, एल्युमिनियम बोर्ड र पीसीबी बोर्ड बीच के भिन्नता छ। यस प्रश्नको लागि, तलको भागले तपाईंलाई भन्दछ कि ती दुई बिच के भिन्नताहरू छन्?
पीसीबी बोर्ड र एल्युमिनियम बोर्ड पीसीबीको आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरिएको हो। हाल, बजारमा एल्युमिनियम आधारित पीसीबी बोर्ड सामान्यतया एकतर्फी एल्युमिनियम बोर्ड हो। पीसीबी बोर्ड ठूलो प्रकारको हुन्छ, एल्युमिनियम बोर्ड केवल एक प्रकारको पीसीबी बोर्ड हो, यो एल्युमिनियममा आधारित धातु प्लेट हो। यसको राम्रो तापीय चालकताको कारण, यो सामान्यतया LED उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ।
पीसीबी बोर्ड सामान्यतया तामा बोर्ड हो, जुन एकल प्यानल र डबल-साइड बोर्डमा पनि विभाजित हुन्छ। यी दुई बीच प्रयोग गरिएको सामग्री धेरै स्पष्ट भिन्नता हो। एल्युमिनियम बोर्डको मुख्य सामग्री एल्युमिनियम प्लेट हो, र पीसीबी बोर्डको मुख्य सामग्री तामा हो। एल्युमिनियम बोर्ड यसको पीपी सामग्रीको लागि विशेष हो। तातो dissipation एकदम राम्रो छ। मूल्य पनि धेरै महँगो छ
तातो dissipation मा दुई संग तुलना, गर्मी dissipation मा एल्युमिनियम बोर्ड को प्रदर्शन पीसीबी बोर्ड भन्दा अधिक राम्रो छ, र यसको तापीय चालकता पीसीबी भन्दा फरक छ, र एल्युमिनियम बोर्डको मूल्य अपेक्षाकृत महँगो छ।